Leighton Baines tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Leighton Baines tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny havia azo havaozina izay fantatra amin'ny anarana; " 'Ny Duke". Ny Leighton Baines Story Child Plus plus Untold Biographie Taken dia mitondra anao fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny OFF sy ON-Pitch izay fantatra momba azy.
Eny, izy no izy fantatra indrindra amin'ny fahaiza-manaony sy ny sazy. Na dia izany aza, vitsy mpankafy mpankafy ihany no mahafantatra ny momba an'i Leighton Baines Bio izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Leighton Baines ny tantaram-pahaterahana an-dàlam-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Leighton John Baines dia teraka tamin'ny 11 ny volana desambra 1984 tao Kirkby, Royaume-Uni ho an'ny Mr sy Mr John Baines. Teraka sagittarius izy.
Niorina tao Kirkby, Merseyside, i Baines dia nianatra tao St. Joseph The Schoolyard Primary School. Ny sekoly ambaratonga voalohany ao Liverpool no nanome azy ny Ny fahafahana hilalao amin'ny lalao fifaninanana amin'ny lalao ara-panatanjahantena. Rehefa avy nahita ny fampanantenany tany am-piasany izy dia nanapa-kevitra ny ray aman-dreniny fa hampiditra ny zanany lahy hanatevin-daharana ny baolina kitra amin'ny alahady ny hetsika isan-kerinandro izay tsy nanelingelina ny fianaran'i Leighton Baines.
Aza hadino fa: Ny lalao baolina kitra Alahady dia teny ofisialy ao Royaume-Uni mba hamaritana ny ligin'ny baolina fandaka izay milalao amin'ny alahady, mifanohitra amin'ny asabotsy kokoa mahazatra.
Nandritra ny taonan'ny 10 na dia teo aza ny fanatrehana ny lalao baolina kitra ho toy ny zaza ampanantenaina, dia iray monja no nijanona. Leighton Baines dia saro-kenatra ary navitrika. Saro-kenatra no nahatonga azy hanana voka-dratsy goavana izay tsy nahatonga azy ho namana hafa. Soa ihany fa nanampy azy handresy ny fahatsorany ny ray aman-dreniny sy ny mpampianatra azy. Izany dia nahasarika ny fientanam-po ho lasa mpilalao baolina kitra.
Leighton Baines ny tantaram-pahaterahana an-dàlam-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana -Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny fitiavan'i Leighton Baines ny fitiavan-tanindrazana dia ho an'i Everton kokoa noho i Liverpool satria nahamenatra azy noho ny fahalianana tamin'i Everton. Tahaka izay nolazainy tamin'ny The Guardian.
Mbola tanora aho. Tsy nahaliana ahy intsony i Liverpool, saingy mbola tia mijery baolina kitra aho. Tao amin'ny 1995 FA Cup final 9 aho rehefa nandresy an'i Manchester United 1-0 i Everton. Tamin'izaho nanomboka nijery an'i Everton aho.
Tsy navelan'ny reniny handeha irery tany Goodison Park aho. Hanantitrantitra ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko izy izay efa telo taona mahery noho ny fitarihana ahy. Hahita ny bisy izahay, 50p avy amin'i Kirkby, ary avy eo mihantona ivelany mandrapahafahantsika miditra ao. Miandry isika mandra-pivoakan'izy ireo ny vavahady aorian'ny 75 minitra ho an'ny lalao ho an'ny mpamaky handeha aloha.
Nisy mpiambina teo am-bavahady, ary raha teo am-pandehanana tsara izy ireo dia nisioka sy nampiditra anay. Nisy lehilahy iray, indrindra indrindra, no nikaroka anay. Indraindray, raha tsy kivy izahay, dia hisy asa an-dàlana eny am-baravarana ary tsy hahita na inona na inona izahay. "
Amin'ny maha-tanora tanora be taona azy, i Baines dia namela tanteraka ny fahantrany rehefa avy niaina tamin'ny tontolo ivelany izy ary tamin'ny fitsabahan'ny ray aman-dreniny sy ny mpampianatra araka izay efa voalaza tetsy aloha. Nanohy nilalao ny alahady izy nandritra ny ekipa iray antsoina hoe Fomba Fomba anananao miaraka amin'ireo matihanina amin'ny ho avy Ryan Taylor (izay niafara tao Newcastle) ary David Nugent (Portsmouth sy Leicester, ankoatra ny hafa).
Tena ilaina ny manamarika fa ny Leighton Baines dia nahazo diplaoma tamin'ny Sunday League ary nantsoin'i Everton. Taorian'ny nanatrehany fitsapana, dia noraisina ampahany amin'ny akademia izy. Ao amin'ny lalan'ny fanamafisana hafa miaraka amin'ny klioba dia nolavin'ny Baines avy amin'ny Akademia. Fitsarana hafa avy any Wigan no nahomby. Nijanona tao Wigan izy mandra-pahatongan'ny 2002 rehefa nandray anjara tamin'ny ekipa zokiny izy. Ny Baines dia nilalao teo amin'ny faritra afovoany sy ny fanafihana; Raha vao nanomboka ny asany ambony tao Wigan izy dia nanomboka nilalao teo amin'ny toerany havia.
Fahagagana, nanapa-kevitra ny handeha ho any an-damosin'i Liverpool i Liverpool noho ny fiahiany azy. Rehefa nandre izany i Baines dia nahatsapa fa ny fiafaran'ity izao tontolo izao ity ary taitra dia tonga koa i Everton. Nanaiky an'i Everton izy taorian'ny fandresen-dahatra maro sy ny fialantsiny ary koa ny amin'ny fomba hanakaikezana ny ray aman-dreniny. Ny ambiny, araka ny filazany matetika, dia tantara.
Leighton Baines ny tantaram-pahaterahana an-dàlam-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Ary ao ambadiky ny mpilalao baolina any Angletera, misy vady mahafinaritra na sipa.
tahaka Toby Alderweireld, Nanomboka ny fifandraisany tamin'ny kianja filalaovana i Baines niaraka tamin'ny malalany kely antsoina hoe Rahely. Ny fifandraisan'izy ireo dia nahatonga azy ireo tsy hahazo ny tena fitiavana. Nahatsiaro i Baines indray mandeha fa ny iray tamin'ireo fahatsiarovany voalohany tany amin'ny fahatsiarovany izay nanambara ny fitiavany an'i Rachel ary mino fa afaka manambady izy ireo indray andro any.
Tao amin'ny 2009, Leighton Baines dia nanambady an'i Rahely tamin'ny lanonana tsiambaratelo. Ny mpivady dia manana ankizy 3 miaraka amin'ny olona voalohany teraka raha vao taona 18 fotsiny i Leighton. Ity ambany ity ny sarin'ny vorona Baines izay faharoa amin'ny havia.
Rachael dia iray amin'ireo vehivavy Evertonian vavy sy sipany izay nanome toky ny harenam-bolan'ny vadiny mba hanampy amin'ny fanangonam-bola amin'ny hetsi-panoheran'ny kanseran'ny nono.
Leighton Baines ny tantaram-pahaterahana an-dàlam-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana manokana
Leighton dia mahaliana sy mavitrika. Ny fisainan'ny sainy sy ny filôzôfôksa aminy dia mandrisika azy hitady sy hivezivezy foana momba ny tena dikan'ny fiainana. Miankina be dia be izy, manintona ary mientanentana, ary tia fiovana. Baines dia afaka manova ny eritreriny amin'ny hetsika mivaingana ary hanao zavatra mba hanatratrarana ny tanjony.
Leighton Baines Tanjaka: Leighton Baines dia malala-tanana, tia tena ary manana fahatsapana vazivazy lehibe.
Leighton Baines Fahalemena: Hanambara zavatra na inona na inona tsy mety.
Inona no tian'i Leighton Baines: Fahalalahana, fitsangatsanganana, filozofia ary ivelan'ny namany akaiky, Miles Kane.
Inona no tsy tian'i Leighton Baines: Ny vahoaka clingy, izay voafintina, ny teoria miandalana, ny antsipiriany.
Leighton Baines ny tantaram-pahaterahana an-dàlam-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Leighton dia avy amin'ny fianakaviana ambany kokoa eo anivon'ny fianakaviana. Indray mandeha, ny ray aman-dreniny dia tsy ampy hanan-karena mba hanomezana ny tapakila ara-potoana feno Everton ho azy amin'ny maha-zaza azy. Tsy afaka nividy tapakila Everton tokana ho an'i Leighton zanany izy ireo. Ny raim-pianakaviana sy ny mamanay dia namela ny zanany lahy niaraka tamin'ny anadahiny mba hiandry eny ivelan'ny Park Goodison ho an'ireo varavarana misokatra hanokatra. Folo minitra sarobidy afaka maimaimpoana!
Tsara ny manamarika fa ny tsirairay ao amin'ny fianakaviany sy ny havany no mpankafy Liverpool na Evertonian. Baines dia nijanona ela tao Everton noho ny ray aman-dreniny malala izay tia ny hifandray akaiky amin'ny zanany.
Baines dia nanoritsoritra ny fomba nandraisan'ny ray aman-dreniny azy taorian'ny nandraisany ny fandàvany an'i Everton hametraka azy ho ao amin'ny akademia. Ao amin'ny teniny
"Tonga tao an-trano aho tamin'io andro io ary nihevitra fa izany no izy. Nolazaina fa tsy dia tsara loatra aho tamin'ny fipoahana goavana. Avy eo dia nankany Wolves aho ary nilalao lalao fitsarana.
Taorian'ny taona vitsivitsy, dia faly niaraka taminy i Everton ary naniry ny hiverina izy. Raha ara-jeografika dia mora kokoa ho an'ny ray aman-dreniko izany, izany no nandehanako sy nipetrahako. "
Hoy i Baines.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Leighton Baines momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Michael Keane Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Fahagagana
Cenk Tosun tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Daty efa namboarina: 24 Janoary 2019
Daty navaozina: 22 aogositra 2020